प्रधानमन्त्रीको डिस्चार्ज कति बेला ?
काठमाडौं – महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा पूर्ण सुधार आएको छ । स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि अस्पतालले प्रधानमन्त्रीको डिस्चार्जको तयारी थालेको छ ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई गत सोमबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थामा पूर्ण सुधार आएको र उनको डिस्चार्जको तयारी भइरहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. कृष्ण श्रेष्ठले बताए ।
बढी दौडधुप र कामले स्वास्थ्य बिग्रनसक्ने भन्दै डाक्टरहरुले ओलीलाई आरामका लागि सुझाएका थिए । डाक्टरहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अस्पतालमै आराम गर्नु उत्तम हुने सुझाव दिएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै डिस्चार्ज भएर सरकारका काम व्यवस्थित गर्न चाहेका छन् । स्वास्थ्यमा पनि पूर्ण सुधार आएको र प्रधानमन्त्रीको पनि डिस्चार्ज हुने चाहना रहेकाले आज दिउँसोतिर डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरिएको अस्पताल स्रोतले बतायो ।
Tagsअस्पताल केपी शर्मा ओली